Obengumqeqeshi wePirates usekudalulile okumenze washiya | News24
Obengumqeqeshi wePirates usekudalulile okumenze washiya
Cape Town – Lowo obengumqeqeshi we-Orlando Pirates osanda kusula, uKjell Jonevret , uthi wanquma ukuthi avele asule kule kilabhu ngenxa yokuthi wayengakwazi ukuba nezwi ezinqumweni ezithathwayo.
Lo mqeqeshi ongowokudabuka eSweden uhlale isikhathi esingaphansi kwezinyanga eziyisithupha kwi-Pirates nalapho ahola khona leli qembu kowamanqamu emqhudelwaneni weNedbank Cup nokuyilapho lezi zinkunzi zaseSoweto zashaywa khona iSuperSport United, kodwa wahluleka wancama ukusiza leli qembu ebe-lidonsa ngodizili ukuba liqede liyingxenye yamaqembu angu-8 aphezulu kwi-log yePSL.
Kubukeka sengathi lo mqeqeshi oneminyaka engu-55 ubudala ubangenalo nhlobo izwi ngokusayinwa kwabadlali abasha kuMabhakabhaka.
Ngemuva kokusula kwakhe kulandela ukuthelwa induku izimbangi iKaizer Chiefs emqhudelwaneni weCarling Black Label, indawo yakhe ibe isithathwa ngu-Milutin Sredojevich.
Ekhuluma nesiteshi sikamabonakude saseSweden, uJonevret uthe, “Izimo zokusebenza zikhethekile kakhulu ekilabhini. Awubandakanyeki ngokuphelele futhi lokho kuyanengana. Ukuxhumana bekungekuhle kahle futhi bekunzima ukwenza izwi lami lizwakale. Ikilabhu enkulu [enabantu] abaningi kakhulu abafuna ukubandakanyeka futhi bathathe izinqumo.
“Umunxa wepolitiki usezingeni eliphezulu kakhulu ekilabhini. Kodwa ayikho nhlobo imizwa emibi. Mina nekilabhu sahlukana njengabangani.Manje isikhathi sokuthi ngiqhubekele phambili. Ngisakholwa ukuthi ngenza umsebenzi omuhle ngaphansi kwezimo ezinzima.”